FAMOTSIANA OMBY HALATRA : Misy tompon’andraikitra ambony voatonona ho mpanelanelana
Hatreto mbola saika ireo dahalo na malaso manatanteraka ny asa ratsy mivantana mandritra ny trangana fanafihana hatrany no voasambotra sy tra-tehaky ny mpitandro filaminana. Voaporofo anefa fa misy tompon’andraikitra na olom-panjakana ambony tafiditra amin’ity raharahana halatr’omby mavaivay eto Madagasikara ity. 15 septembre 2021
Fahazarana ny lalan-dririnina. Mbola mahazo vahana tanteraka eto Madagasikara ny halatr’omby. Isan’andro no saika andrenesana fandrobana omby amina faritra maro, toy ny any amin’ny Faritra Melaky, Bongolava sy ireo Faritra mandrafitra ny tapany Atsimon’ny Nosy iny. Manao izay ho afany amin’ny fampandriana fahalemana ny Fitondram-panjakana. Hetsika fampandrian-tany tamin’ny endriny samihafa no efa natao.
Teo ihany koa ny fananganana an’ireo fotodrafitrasa manokana natao hisahanana izany saingy mbola tsy nisy nahafoana tanteraka ny trangana halatr’omby hatramin’izao. Ny fahanginan’ny trangana halatr’omby mandritra ny fe-potoana maromaro no misy fa tsy mbola tanteraka kosa ny mahafoana azy tanteraka. Eo anatrehan’ny ezaka ataon’ny mpitandro filaminana sy ny fokonolona anefa dia saika ireo dahalo mpangalatr’omby hatrany no voasambotra. Ireto farany no mamoy ny ainy rehefa misy fifandonana, ireto farany no iharan’ny fitsaram-bahoaka na midoboka am-ponja. Ireo dahalo ambony latabatra kosa mbola tsy nisy ny tratra na dia iray aza hatramin’izao.
Tsy azo ihodivirana anefa fa na mpanome vaovao an’ireo dahalo, na ny mpamatsy fitaovam-piadiana azy ireo ary indrindra ny mpandray an’ireo omby halatra dia tsy maintsy misy. Iza àry izany ? Ny tompon’andraikitra voalohany eo anivon’ny Zandarimariam-pirenena dia nilaza fa misy tompon’andraikitra miray petsapetsa amin’ireo olon-dratsy matoa tafavoaka voadio ary azo amidy ara-dalàna eny an-tsena ireo omby avy nangalarin’ny dahalo.
Hanaovana ezaka manokana
Nametraka ny fanambiny avy amin’ny fampandriana fahalemana indrindra indrindra fa ny fanafoanana ny halatr’omby ireo tompon’andraikitra voalohany nifandimby teo anivon’ny Zandarimarima-pirenena. Izy ireo izay samy manana ny paikadiny manokana hahafahana manatratra ny tanjona. Ankehitriny, mijanona ho fanamby goavana ny handresena tanteraka ity trangana halatr’omby mahazo vahana manerana ny Nosy ity. Nambaran’ny Jeneraly Gellé Serge fa mitohy ny ezaka ary ezaka goavana no hatao amin’ny ady amin’ny famotsiana omby halatra. Raha ny nambarany dia tsy vitan’ny Zandary irery izany fa tsy maintsy miainga amin’ny fifanampian’ny tsirairay indrindra fa ireo nomena andraikitra manokana amin’ny fanaovana ny taratasin’omby.
“Tsy maintsy hanaovana ezaka izy io, tsy vitan’ny Zandarimariam-pirenena irery satria tsy ny Zandary no manome taratasin’omby fa ny Zandary kosa no manao ny fanaraha-maso”, araka ny voalazany hatrany. Tafiditra ao anatin’izay fitadiavam-bahaolana izay indrindra dia nidina ifotony tany amin’ny Faritra Melaky ny tenany. Ity Faritra ity dia anisan’ireo ahitana trangana famotsiana omby halatra amin’ny tahany ambony. Nifampidinika tamin’ireo mpiara-miasa isan-tsokajiny ny tenany hahafahana mitady izay vahaolana maharitra. “Ny tanjona dia mba ho sambatra ny vahoaka, afaka mamokatra am-pilaminana, izay no velirano voalohany nataon’ny Filoham-pirenena. Hatao tanamaro ny ady amin’ny tsy fandriam-pahalemana manomboka izao mba hiantraika any amin’ny vahoaka”, araka ny fanazavana hatrany.
Olom-panjakana manao taratasy hosoka
Heverina ho anisany antony fototra mbola tsy mahafoana ny halatr’omby amin’izao fotoana ny fisian’ireo olom-panjakana na olona misahana andraikitra ambony manamora ny asa ratsin’ireo dahalo. Mazava ho azy, fa rehefa misy ny trangana halatr’omby miseho dia tsy maintsy diovina amin’ny alalan’ny fanaovana taratasy hosoka ireo omby halatra mba hahafahana mivarotra azy ireo eny an-tsena. Namaky bantsilana izany ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimariam-pirenena, ny Jeneraly Gellé Serge fa misy tompon’andraikitra mahasahy manome taratasy ara-dalàna an’ireo omby avy nangalarina. Fanadihadiana niainga efa tany amin’ny taona 2014, hoy izy, no nahafantarana izany ary porofon’izany dia omby an’arivony maro no tsy hita popoka.
“Rehefa natao ny fanadihadiana efa nanomboka tany amin’ny taona 2014 tany ho any, tany Fianarantsoa sy Toamasina dia hita fa misy tompon’andraikitra mahasahy manome taratasy nefa omby tsy fanta-piaviana akory dia lafo ilay omby ary lany hatrany Antananarivo sy Tsiroanomandidy”, hoy ny fanazavana nomeny. Faritra maro manerana ny Nosy no ahitana io tranga io, raha tsy hilaza afa-tsy ny ao anatin’ny Faritra Melaky. Raha ny tatitra noentiny dia maherin’ny telo arivo ireo omby very tsy hita popoka tao anatin’ity Faritra ity. Izany hoe, efa lafo soa aman-tsara ireo omby ireo rehefa tonga teny an-tsena noho io fanaovana taratasy hosoka io.